Mhoroi, munhu wese, pane imwe yakanaka nhau kwatiri uye isu, isu takagadzira mbiri nyowani chimiro posture corrector-smart posture corrector. Mifananidzo yechitambi chako se,
Izvi ndizvo zvigadzirwa zvedu zvitsva, ivo vanogarika paunenge uchipfeka, uye zvinoshanda kwazvo pane posture corrector.
KUKOSHESA: Chaizvo-chaiyo chaiyo yekutarisa kutarisisa. Kana musana wako wakakotama kupfuura makumi maviri nemadhigiri, zvinogadzirisa chimiro chako neyekudzungudza chenjedzo kuti urambe wakasimba.
INGENIOUS DESIGN: 8 yakarongedzwa dhizaini iri ergonomic. Inoenderana nehuremu hwemunhu kana apfekwa. Iyo yepamusoro-mhando midziyo yerabha inochinja-chinja, ichiita kuti unzwe wakasununguka, uye iwe hauzonzwa kusagadzikana kusagadzikana pamapfudzi ako kana iwe uchinge wakapfeka.
ISAYENSI YEMAHARA: Iishandise kwemaawa maviri pazuva kwemavhiki matatu, uye unogona kunzwa shanduko dziri pachena. Mashure kumashure anodzidziswa kuti agadzire tsandanyama ndangariro uye achinje maitiro akaipa.
KUKOSHESA: Kubhadhara kweawa imwe uye kushandiswa kwemazuva gumi nemashanu. Iyo 500mA yakakura-kukwanisa bhatiri inogona kushandiswa kwenguva yakareba. Iyo inogona kuenderera nekugadzirisa yako yekumira kwehupenyu hwakareba uye inoda pasina imwe yekugadzirisa.
1. Pfeka ganda risingaoneki, rakagadzikana uye rinofema;
2. Omnidirectional posture yekutarisa, kurovedzera tsandanyama ndangariro;
3. Iyo yekumashure switch iri mukati mekusvika nyore, uye vese vakuru nevana vanogona kuishandisa nyore.
Nguva: shanda, funda, famba imbwa, famba, zororo, nezvimwe.
1. Gadzirisa harness yacho kusvika pakakodzera urefu;
2. Mushure mekupfeka, simudza musana, kusimudza chipfuva, uye ipapo bata switch ye1 yechipiri kune simba pane chiyeuchidzo, chiyeuchidzo chinodedera katatu;
3.Kuisa yekumira kurudyi kusvikira chigadzirwa chabvunda katatu;
4.Nguva imwe chete iyoyo, chiyeuchidzo chakarekodha chako chakakodzera mafambiro;
5.Kana iwe uine hunchback Radian yeanopfuura makumi maviri degrees, iyo yekuraira chiyeuchidzo inozozvizivisa uye wozoburitsa vibrate yekuyeuchidza;
6.Iyeuchidzo yekumashure inoyeuchidza kuti uchengete chipfuva chako chakatarisa uye utarise mudenga nekubvunda.
Kukura: imwe yakakodzera zvese, Chinyorwa: ABS + yakakwirira elastic nylon bhandi.
Kurema: 85g, Basa: kugadziriswa kwemuzongoza, kuvandudza hunchback, kuchengetedzwa kwechiono, Bhatiri huwandu: 500mAH / 3.7v, Kuchaira chimiro:
standard V8 USB interface, vanhu vanoshanda: vana / vakuru vanokwana vese, magetsi: 5v, kushandiswa kwesimba: 0.4w, nguva yekuchaja: akaenzana maawa maviri, kubhadharisa magetsi: 5v